कक्षा १२ को परिक्षामा कोरोना संक्रमितलाई सहभागी नगराइने | हाम्राे प्रयास
Home शिक्षा कक्षा १२ को परिक्षामा कोरोना संक्रमितलाई सहभागी नगराइने
हाम्राेप्रयास । लामो समयको अन्योलपछि तय भएको कक्षा १२ को परीक्षा कोरोनाभाइरसको बढ्दो संक्रमणका कारण प्रभावित हुने हो कि भन्नेमा विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालयमा संशय उत्पन्न हुन थालेको छ। बोर्ड भने सुरक्षित रुपमा निर्धारित मितिमै परीक्षा सञ्चालन गराउने तयारीमा छ।
काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न स्थानमा कोरोना संक्रमितको संख्या अत्यधिक बढिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १७ कात्तिकको तथ्यांक अनुसार, उपत्यकाका तीन जिल्ला तथा झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन, मकवानपुर, काभ्रे, कास्की, नवलपरासी (पश्चिम), दाङ, रुपन्देही र कैलाली जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या ५०० भन्दा बढी छ।
यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेको अवस्थामा विद्यालयले परीक्षा संचालन गर्न सम्भव हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेल बताउँछन्। “महामारीको अनिश्चितता बढ्दै जाँदा लामो समयको अन्योलपछि परीक्षा मिति तय भएको छ”, उनी भन्छन्, “बजार, सार्वजनिक यातायात पनि खुलेको अवस्थामा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गराएर परीक्षा गराउन सकिन्छ।”
काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल भने संक्रमितको संख्या तीव्र रुपमा बढेसँगै विद्यार्थी र अभिभावकमा त्रास बढिरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन् “लामो समयपछि परीक्षा तालिका सार्वजनिक भएसँगै सबैमा खुशी छाएको थियो, तर पछिल्लो समयको कोरोना संक्रमितको संख्याले फेरि अत्याउन थालेको छ।”
ललितपुर कुपण्डोल निवासी अभिभावक गीता कुँवर अहिलेको स्थितिमा परीक्षा गर्न नहुने बताउँछिन्। भन्छिन् “लामो समयपछि परीक्षा हुन लाग्दा खुशी थियौं, तर संक्रमितको संख्या बढेसँगै छोरालाई परीक्षा दिन पठाउने कि नपठाउने भन्ने दोधारमा परेकी छु।” उनी संक्रमितको संख्याका आधारमा ‘रेड जोन’ र ‘ग्रीन जोन’ छुट्याएर कम संक्रमित भएको क्षेत्रमा परीक्षा गराउनुपर्ने सुझाव दिन्छिन्। “संक्रमित बढी भएको क्षेत्रमा अवस्था सामान्य हुँदै गएपछि परीक्षा गराए सुरक्षित हुनेथ्यो”, उनी भन्छिन्।
बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. पौडेल भने विद्यालयले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अनुसार परीक्षा गराउने भएकाले परीक्षा दिन आउन डर मान्नु नपर्ने बताउँछन्। बोर्डले विद्यालयहरुलाई विद्यार्थीले ढुक्क भएर परीक्षा दिन सक्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ। उनी विद्यार्थीलाई पनि भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने लगायत स्वास्थ्य सुरक्षाको सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाएर परीक्षा दिने ठाउँमा आउन आग्रह गर्छन्।
डेढ घण्टाको परीक्षा, संक्रमितलाई निषेध
परीक्षा बोर्डका अनुसार, विद्यार्थी पढ्ने सम्बन्धित विद्यालयमा नै परीक्षा केन्द्र हुनेछ। ठूलो खुला हलमा ३० जना र सानो हलमा ६ जना राखिने, विद्यार्थीलाई दुई मिटरको दूरीमा राखिने, हेल्थ डेस्क अनिवार्य गरिने भएकोले विद्यार्थीले सहज र सुरक्षित रुपमा परीक्षा दिने वातावरण बन्ने दाबी बोर्डले गरेको छ।
ठूला विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढी हुने भए पनि अहिले अरु कक्षाको पठनपाठन बन्द भएकाले हलको खाँचो नहुने बोर्डको भनाइ छ। करीब ५० वटा ठूला विद्यालयलाई तोकिएको मापदण्ड अनुसार भौतिक दूरी कायम गरेर परीक्षा गराउन नसकिए नजिकैको विद्यालयसँग समन्वय गर्न बोर्डले निर्देशन दिएको छ।
अहिलेको असहज परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर परीक्षाको समय घटाएर डेढ घण्टामा झारिएको बोर्डले जनाएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल कोरोना कहरकै बीचमा जीवन अगाडि बढाउनुपर्ने भएकाले विद्यार्थी पनि सचेत भएर परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने बताउँछन्। “कोरोनाको अन्योलमा विद्यार्थीको पढाइ अलमलिनु नदिनु महत्वपूर्ण कुरा हो”, उनी भन्छन् “विद्यालयले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पूरा गर्छ। विद्यार्थी स्वयं पनि घरदेखि परीक्षा हलसम्म र परीक्षा हलदेखि घरसम्म जाँदा सचेत भएर यात्रा गर्नुपर्छ।”
बोर्डले कोरोना संक्रमित भई उपचाररत विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी नहुन आग्रह गरेको छ। संक्रमितको लागि सरकारद्वारा मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरिएको रिपोर्टको आधारमा पछि छुट्टै परीक्षाको व्यवस्था हुने जनाइएको छ।
Previous articleआतंककारी हमलामा परी एकको मृत्यु
Next articleबंगलादेशले पैचोमा मल नदिने